Umlando We-Anime Reaction YouTuber: USuzy Lu (Izindaba) - Okunye
Umlando We-Anime Reaction YouTuber: USuzy Lu, Nempikiswano (Qala Ukuqeda)
Kade ngangibuka umdlalo noSuzy Lu badlale isikhashana manje, base behlangana nayo ithuba.
Uma ngabe ubulandela i-Mecha Company isikhathi esithile manje, uzokwazi ukuthi ngingakhetha kanjani ngokubika 'ezindabeni'.
Ngeke ngikwenze ngaphandle kokuthi kufaka isandla enjongweni enkulu.
Le drama kaSuzy Lu emphakathini we-anime (nangaphezulu) ingenye yalezo zindaba.
Ngubani uSuzy Lu?
USuzy Lu iyi-anime futhi ukudlala ukusabela kwe-YouTuber kusuka eGlasgow, eScotland. Uyazi, uhlobo lwe-YouTuber olubuka amavidiyo we-anime futhi luphendule ngesikhathi sangempela? Yilokho akwenzayo ngamafuphi.
Usebudlelwaneni obaziwayo noJustin, isoka lakhe.
USuzy uqale i-YouTube ngo-2013 ngokwesiteshi sakhe se-YouTube. Kodwa akazange aqale ukushicilela amavidiyo kuze kube ngu-2014.
Iningi lalo bekungukuhamba kwemidlalo yevidiyo nokuqukethwe okuhlobene ne-non-anime ngaleso sikhathi.
Iqale kanjani idrama ye-Anime Reaction YouTuber Suzy Lu
suzy lu imeyili yansuku zonke
suzy lu iphephandaba lelanga
Konke kuqale ngo-2017 (ngokususelwa kuzinsuku ezirekhodiwe).
Ngalesi sikhathi uSuzy Lu ungene kuTwitter wenza inhlekisa kubantu kwaMc Donalds abangena 'esitelekeni'.
Ngemuva kokudabula abantu abaningi futhi wenqaba ukuhlehlisa izitatimende zakhe:
Futhi ezinye izindawo ezidayisa izindaba e-UK zibike ngakho, okuthathe impikiswano yaba sezingeni elisha.
I-YouTube Rewind 2018
USuzy Lu ngoDisemba 6th 2018 wenze ividiyo yokusabela lapho evezwa khona I-YouTube Rewind 2018. Ngoba wayeyi-YouTuber 'encane' ngaleso sikhathi, ehlobene nabavoti abavame ukuvela.
'Ukufakwa' kwakhe kwenze abantu bangabaza, engizongena kukho ngokuhamba kwesikhathi.
Idrama kaSuzy Lu 2019
Idrama kaSuzy Lu ngo-2020 ingalandelwa emuva ngoMashi 2019.
“Iqale ngoMashi 11, 2019 lapho uSuzy efaka isiteleka se-copyright kuMark After Dark’s I-Last Guardian VR ividiyo, evulwe ngesiqeshana esihlekisa ngoSuzy ngokusabela kwakhe ngokwehaba emdlalweni ofanayo.
Impendulo kaSuzy ithi wayenephutha ngoba unelungelo lobunikazi lobuso bakhe. '
Angikwazi ukukhuluma ngokuqukethwe yividiyo kaMarkAfterDark kuSuzy Lu (angikaze ngiyibone), kepha impendulo kaSuzy Lu yokuthi 'Nginelungelo lobunikazi lobuso bami' ihlekisa kakhulu .
I-YouTubers isabela kumdlalo weSuzy Lu
Njengoba kukhonjisiwe ngu Ama-Kiwifarms:
“Lokhu kuqubule intukuthelo phakathi kwezindaba ezincane ze-Youtube neziteshi zomdlalo weshashalazi ezifana noGG Reloaded noTipster, abaqale ukusicekela phansi isimo besifanele.
Basheshe bakhomba ubuzenzisi bukaSuzy, omenza aphile okuqukethwe okune-copyright, ukukhononda ngomunye umuntu usebenzisa okuqukethwe kwakhe. ”
Lona ngumqondo wokuthi kungani impikiswano kaSuzy Lu isaqhubeka ngo-2020.
Uthole ukunakwa kweziteshi ze-YouTube eziteleka nge-copyright:
Mgxeke (noma ngabe ayinabungozi).
Noma khombisa ukungahambisani namaqiniso ahlobene noSuzy Lu.
Kwezinye izimo - nje 'ukusho' uSuzy Lu noma ngabe kuyinto engeyinhle noma cha ithola amavidiyo e-YouTube kususiwe, njengoba ezophuma ayobheka noma yini angayithandi.
Into ethokozisayo ngesimo se-YouTube ukuthi kukhona ama-YouTubers amakhulu enza lolu hlobo lokuphawula, futhi akwenzeki lutho. Ngakho-ke kukhona izindinganiso eziphindwe kabili ekudlaleni.
I-YouTubers ikhombisa ubuzenzisi bukaSuzy Lu
I-YouTubers GG ilayishe kabusha futhi iTipster bemba le vidiyo ukufakazela iphuzu labo ngobuzenzisi bukaSuzy Lu.
Iphuzu labo yilokhu:
USuzy Lu wenza ama-anime reaction amavidiyo anokuqukethwe okune-copyright okuvela eNaruto, SAO njalonjalo. Kepha ukhononda lapho 'i-copyright' yakhe isetshenziswa futhi amaka namavidiyo walezo zizathu lapho kuhilela okuqukethwe kwakhe.
Futhi uSuzy Lu usakaza bukhoma okuqukethwe okuthathwe kwi-BBC esiteshini sakhe se-YouTube. Emuva lapho ayenababhalisile abangama-55K (2016).
Lokhu ukuzenzisa okukhulunywa ngakho ngama-YouTubers
Ngemuva kwezinsuku ezithile ngemuva kokuba wonke umdlalo ufinyelele esiqongweni sawo futhi kwembiwa amathambo ekhabetheni, USuzy Lu uphendule ekuphikisaneni.
Ngiqaphele ukuthi ividiyo yoqobo ibingatholakali ndawo ku-YouTube, kodwa igcinwe kungobo yomlando futhi abanye abantu babeke izandla kuyo.
'NgoMashi 21 uSuzy ufake ividiyo enesihloko esithi' Addressing The Hate - What ACTUALLY Happened! ' lapho ayedlala khona isisulu. Uthe wayengaqondi ukuthi kungani ayejikijelwa kuye ngokufaka isiteleka esiteshini sikaMark.
Uvumile ukuthi usebenzise okuqukethwe yi-BBC ngendlela engeyona ekahle yokusetshenziswa, kodwa wazama ukusho ukuthi akukubi ngoba ubengakwenzi ngenhloso yokukhulisa isiteshi sakhe noma ukusenza kabi. ”
NgoMashi 25th 2019:
“NgoMashi 25 uTipster wenza i-livestream exoxisana nommeli uYoutuber Ian Corzine ukuxoxa ngeSuzy eshaya ngevidiyo kaMark.
U-Ian uthe lesi siqeshana kungenzeka sibhekwe njengokusetshenziswa okulungile ngokususelwa kumthetho wamacala nokuthi uSuzy wayenephutha. USuzy uphendule ngokuhlaba umkhosi umfula i-VOD futhi wehliswa. ”
NgoMashi 28 uSuzy wasichitha isiteleka sakhe se-copyright kuMark.
UTipster ukwazile ukuphinda alayishe ingxoxo yakhe ka-Ian Corzine.
Isoka likaSuzy Lu u-Justin uyangenela ukuzivikela
Njengoba kushiwo iphosta kaKiwifarms:
'UJustin uzame ukuvikela uSuzy ekubuzweni ngenkathi ethi wayengeke akwazi ukuzivikela ngoba wayecosha amatshe' ahamba nenja yabo. '
Lokhu “kuhamba” kwaqhubeka isikhathi esingaphezu kwehora nengxenye. Ngemuva kwamahora amabili uSuzy wagcina efikile ezotshela wonke umuntu ukuthi bangabanumzane futhi akazange ananele ukuzivikela.
UJustin uthumele iscreencap somlando wokuhlaba umkhosi kukaSuzy, eveza ukuthi ufake izikhalazo zokuhlukunyezwa ngama-video amathathu weGG Reloaded ngaye. Ibha yokuhambisa ibibonakala eceleni kwesikrini esibonisa ukuthi umlando wefulegi lakhe udlulela ngale kwalaba abathathu kuphela. ”
USuzy Lu uphinde wavela ku I-YouTube Rewind 2019, ngaphandle kwezinga lakhe lababhalisile ngokuqhathaniswa nesilinganiso.
Noma ngamanye amagama: udinga ababhalisile abayizigidi eziyi-10 ukufaka ku-YouTube Rewind. Ngakho-ke kungani abantu becabanga ukuthi kuyasolisa ukubona njengoba engasondeli nakancane. Futhi akukaze kube njalo.
Iziteleka ze-copyright ezivela eTokyo TV (Dec 2019)
“NgoDisemba 27, 2019 isiteshi sikaSuzy sashaywa iziteleka eziningi zamalungelo obunikazi yiTV Tokyo ngenxa yokusebenzisa kwakhe ngokungemthetho iziqephu ezinde cishe zonke UNaruto . Njengoba inqubo ejwayelekile ku-Youtube, isiteshi sikaSuzy sinqanyuliwe ngenxa yokuba neziteleka ezingaphezu kwezintathu eziphikisana nayo.
Lokhu kuqedwa kwaphela amahora angaphansi kwama-48. NgoDisemba 29 ubuye ne-video esihloko sithi “What The F Happened ??”
Njengoba noma ngubani azi nge-YouTube kanye ne-copyright iyonke, uma inkampani noma umuntu eseyazi bazothatha okuqukethwe kwakho phansi.
Eziphendulela uSuzy Lu uthe uzobiza i- “Sue TV Tokyo” ngokushaya ngokungemthetho isiteshi sakhe se-YouTube…. Ngokuqukethwe kwe-copyright iTokyo Tokyo ingumnikazi wayo.
“Uphinde waveza ukuthi unabantu abaku-Youtube abasusa iziteleka esiteshini sakhe, ngaphandle kokunikeza i-TV Tokyo izinsuku zebhizinisi eziyi-10 zokuqala isenzo sezinkantolo njengoba kudingwa ngumthetho.
Uma kuyiqiniso, lokhu kusho ukuthi i-Youtube yephula umthetho we-copyright wesikhumulo semikhumbi futhi uzibeka engcupheni yokuthola izinyathelo zomthetho.
Ngokufaka irabha esitatimendeni kwizikhalazo zakhe ezibhekiswe kuma-DMCA we-TV Tokyo ngaphandle kokunika i-TV Tokyo ithuba lokulandela izinyathelo zomthetho, kungenzeka ukuthi i-Youtube yephule umthetho we-Safe Harbor (Online Copyright Infringement Liability Limitations Act).
Ithuba lokuthi lokhu kwakukhonjwe ngesikhathi eqala ukushaya uMark njengoba ethi “wakhuluma nabantu kwi-Youtube nge-Fair Use,” noma lokhu kungenzeka futhi kube ukukhuluma kwakhe njengamaphaphu.
Ukubuyiselwa kwesiteshi sakhe, nokho, akusona nje isilima esikhubekisa amagama abo. Abantu abaku-Youtube babeke amaholide abo eholidini ukubuyisa isiteshi sakhe base betshela inkampani enkulu ukuthi iye kubo uqobo. ”
Okuholele kulokhu ngoJanuwari 2020:
“NgoJanuwari 30, 2020 uSuzy wethule isiza sakhe, waqala ukufaka ama-anime reaction amavidiyo akhe lapho.
Ukholelwa ngempela ukuthi ukufaka ama-video akhe ku-Youtube nokumane avimbe isayithi e-Asia kumenza aphephe kubantu abanjengo-TV Tokyo. ”
Uyabona ukuthi kungani le drama inyuse isikhathi esengeziwe.
Manje ulayisha okuqukethwe okufanayo kuwebhusayithi yakhe futhi vimba i-Asia nge-Cloudflare, cishe kube ngathi uthi 'f * ck i-copyright yakho, awukwazi ukwenza i-sh * t ngakho'.
Akuhlukile kunalokho Kiss Anime namasayithi ama-pirate akwenzayo, ngaphandle kokuthi kube ngendlela ethusayo futhi engadumile.
Kuphela kanjani lokhu? Ukuqagela kwakho kufana nokwami.
DMCA Yisa phansi izicelo (Feb 2020)
NgoFebhuwari 2020 iMX International kanye ne-Aniplex America benza izicelo zokususa phansi kuGoogle e-USA.
Lesi sicelo se-DMCA besenzelwe i- iwebhusayithi ngoba uSuzy Lu ulayisha ama-copyright abo ngqo kuwebhusayithi yakhe. Futhi-ke - ukuzuza off it.
Izicelo eziyi-12 ze-DCMA ezibhekiswe ngaphezu kwamakhasi angama-200 + sezenziwe sezizonke.
Ukuqamba amanga ngokukhangisa kweCrunchyroll kuwebhusayithi yakhe (Mashi 2020)
“I-hilarious ebheka ukukhangiswa kweCrunchyroll kuwebhusayithi yami lol. Awuliqondi ibhizinisi, uyayizwa Robbie? ”
Ngaphambi kukaSuzy Lu wahlanza i-akhawunti yakhe ye-Twitter ukufihla ubufakazi, yilokhu akusho.
Njengomuntu one- ukubambisana kwangempela noCrunchyroll nge-Elation (Inkampani kaMecha), sengingakutshela ukuthi uSuzy wayekhuluma amanga aluhlaza.
Njengoba kufakazelwe yile quote:
“Uzamile nokudlala ngezikhangiso zeCrunchyroll ezifakwa kusayithi lakhe njengobufakazi bokuthi unebhokisi likaBlanche lokusebenzisa noma imuphi umfanekiso we-anime awufunayo.
Akanaso isivumelwano sebhizinisi noCrunchyroll, lezo zikhangiso zifakwe yi-Google Adsense eyenza izikhangiso zisebenze ngokungahleliwe. ”
USuzy Lu Ephreli 2020
'Noma ikuphi ukufakwa kwenkomba yokuthi i-Youtube ibingadlali ngamabomu izintandokazi noSuzy yephulwe ngo-Ephreli 10, 2020. Ithimba elisemthethweni iTeamYoutube Twitter liphendule ku-tweet kaJohn Swan ekhononda ngoSuzy oshaya ividiyo yakhe yesibili kuyena.
Ngezwi elinolaka ngokumangazayo, bamemezele kahle ukuthi uSuzy ubengaphansi kokuvikelwa kwabo futhi noma yikuphi ukuhlekwa usulu kwebunzi lakhe elikhulu, elinyanyekayo, elingabukeki, neliguqukile kwakungamukelekile neze. ”
I-YouTube igxumele kuTwitter yavikela izenzo zikaSuzy Lu. Futhi abantu abajabule.
Empeleni lesi ngesinye sezizathu izinkampani ezifana:
Futhi abanye bathunyelwe nge-imeyili ngamalungelo abo okushicilela, nokuthi ahlukunyezwa kanjani.
viz abezindaba suzy lu
ikota suzy lu funimation google
Ephreli 18th 2020 - Idrama iyashisa
Ngibeke amavidiyo ama-2 kuSuzy Lu. Bengingahloniphi, engikwenzile nje ukuxoxa ngesimo esiseduze. Namuhla bengingavinjelwe uSuzy Lu kuphela kodwa ngithole ne-imeyili esongela kakhulu (engaziwa)… Akukho engizokubona lapha… pic.twitter.com/DPMqtiCWxO
- UVara Omnyama (@Vara_Dark) Ephreli 16, 2020
YouTuber Amabhizinisi amnyama weTitan ukhiphe ividiyo ekhuluma ngokugencwa kwakhe ngemuva kokwenza ividiyo kuSuzy Lu.
Noma 'ukunyundela' isithombe sikaSuzy Lu. Kwakuyividiyo ekhuluma ngokwenzekayo (okufanayo nalesi sihloko).
Ukuthi isigameko sokugenca nokuchitha i-akhawunti yangemuva ye-Dark Titans sihlobene yini noSuzy Lu akwaziwa.
Kuyakholeka kakhulu ukucabanga ukuthi ngomunye wabalandeli bakaSuzy Lu.
Ngeke ngingene kuwo wonke amavidiyo okuphendula, kepha:
I-GG ilayishwe kabusha
Futhi ezinye iziteshi zingene shi kulo mdlalo. Futhi amaningi ala mavidiyo ngo-Ephreli 2020 awathathiwanga phansi, ngokungafani namavidiyo ka-2019.
Umkhuba wokunyamalala kwamavidiyo amaningi ushone kancane.
Ephreli 20th 2020 - Okwedlule kukaSuzy Lu njengesiqhwaga
Izindaba eziningi zibukeka zivela nsuku zonke.
Manje amathani amarisidi e-intanethi ayaphuma, akhombisa okwedlule kukaSuzy Lu kokushintshela abantu ngokubukeka kwabo nokuningi okuningi.
Ngokuphikisana noSuzy Lu ubelokhu emaka futhi evimbela amavidiyo ngokwenza i- ngokufanayo into (noma cha). Akunandaba ngenhloso.
Ephreli 22nd 2020 - Inkampani yabameli bakaSuzy Lu 'mbumbulu'
Leyo ifemu yabameli enhle onayo lapho, @SuzyLuOfficial ! pic.twitter.com/bxLCgxP9YK
- Leinad (@leinadtxt) Ephreli 22, 2020
Uma amanga kaCrunchyroll ayengekho mabi ngokwanele, ngaphezu kwakho konke okunye, manje 'inkampani yabameli' kaSuzy Lu kwi-TOS yewebhusayithi yakhe ayilutho kodwa ingaphambili.
Kuholela ebhokisini le-PO likaJustin. Kodwa ifemu yomthetho ekucatshangelwa ukuthi ayikho futhi ikhona ngokuphelele kwenziwe.
Ngezizathu engingazenzi umqondo ngazo.
Hhayi lokho kuphela, kodwa TheQuartering babiza uSuzy Lu 'Ummeli' futhi abanalo nhlobo ulwazi lokuthi ungubani, futhi baze bacabanga ukuthi lonke ucingo lwalungumbombayi.
Lokhu kungubufakazi obengeziwe bokuthi inkampani yabameli bakaSuzy Lu ingumbombayi futhi ayikho.
Ephreli 23rd 2020: USuzy Lu wahlanza amavidiyo kaPatreon
@IsibayaMzansi @JohnSwanYT @TipsterNewsTeam Kuyini lokhu? Ngabe uSuzy Lu uthathe wonke ama-vids akhe ePatreon? Kubonakala sengathi kunevidiyo EYODWA kuphela yamalungu manje! #suzylu pic.twitter.com/6Vsl9XY3Q9
- UJoe B. (@jobutex) Ephreli 23, 2020
USuzy Lu wahlanza amavidiyo ku-akhawunti yakhe kaPatreon.
Emfanekisweni kukhombisa ividiyo engu-1 kuphela. Kepha a Isilondolozi se-Google kukhombisa ukuthi bekukhona ama-93 ngaphambili.
Kuyacaca ukuthi kwenzakalani lapha.
suzy lu patreon 1 ividiyo
USuzy Lu Ukubuyela emuva emuva
Kungenzeka ukuthi iningi lenu seliqaphele ukuthi ngehlisele emuva ukusilela emuva kwamavidiyo abekhona kule Patreon.
Lokho kungenxa yokuthi sisusa yonke into kude neVimeo siye kwiCDN yethu (Cloudflare) esiyisebenzisela iwebhusayithi. '
Okude futhi okufushane kwalesi sithombe ubeka okulingana noCrunchyroll kuwebhusayithi yakhe.
Okuhlukile lapha lobu ubugebengu ngoba akanakho okuqukethwe.
Kufana neKissAnime kodwa ngaphandle kokucasha nedada. Okungukudla okuphelele.
Okunye athe ukubalulile ukuhlela ama-video ukuze ahambisane ne- “Fair Use”, enokuzenzisa okubhalwe kuyo yonke indawo.
suzy lu ukuzenzisa
suzy lu ukuzenzisa 1
suzy lu wasusa ubuzenzisi bevidiyo
USuzy Lu: 'Cabanga wenza ividiyo enikezelwe ukushaya ukubukeka kothile'
Futhi uSuzy Lu: Wenza ividiyo ishaya ngokubukeka kothile. & # x1f937; ‍ pic.twitter.com/gbF5QeNSWJ
- & # x1f1e8; & # x1f1fa; I-GG ilayishwe kabusha & # x1f1e8; & # x1f1fa; (@GOHGAMER) Ephreli 23, 2020
Futhi izithombe-skrini eziningi ezithathwe kumavidiyo asusiwe eziphikisana nama-tweets akhe (awahlanza ngoFebhuwari / Mashi 2020).
Njengoba ukwazi ukubona - uSuzy Lu waziwa ngokwenza amavidiyo ngamanye ukubukeka futhi nokho wakhononda ngempatho efanayo.
Ephreli 25 2020 - Imilayezo ye-Discord 'purge'
KUCHAZA UMMMMM @SUZYLUOFFICIAL ???? pic.twitter.com/5vGyR24nkg
- UJohn Swan & # x1f9a2; (@JohnSwanYT) Ephreli 25, 2020
Ubufakazi obuningi bokuthi uSuzy Lu ubekade ehlanza imiyalezo futhi efihla ubufakazi buyavela.
Okwakamuva kube isithombe-skrini esivela ku-akhawunti yakhe yokungezwani.
Ephreli 26th 2020: I-YouTuber ehlukunyezwa nguSuzy Lu iyavuma
I-YouTuber eqale ngasikhathi sinye njengoSuzy Lu wabelana ngendaba yakhe.
Le vidiyo ingaphezu kwehora elingu-1 nemizuzu engama-24 ubude. Ngakho-ke uthola kuhle okuningiliziwe.
Ephreli 28th 2020: Ukwehliswa kwe-DMCA kwamavidiyo kaPatreon
Lokhu kuthunyelwe ngoJanuwari 2020 kepha kufakwe kungobo yomlando kwavela ngo-Ephreli 28th 2020.
Kungakho ama-Suzy's patreon videos ekugcineni 'anyamalala', okuholela esikhathini samanje.
Ukuvuselelwa kukaMeyi 5th 2020
Ikhasi likaSuzy Lu's Patreon lathi SHUTI phansi kungekudala ngemuva kokuvela kwalesi sithombe.
Kusobala ukwephulwa kwe-copyright yisizathu esenza uPatreon anqume ukwenza okuthile, mhlawumbe ngenxa yengcindezi evela ezinkampanini ze-anime.
Kuqinisekisiwe ukuthi umphathi wewebhu 'ofihliwe' kaSuzy Lu ubizwa Abelo Umsingathi.
Yinkampani yokubamba ephethe amawebhusayithi asogwini lolwandle ukugwema izingqinamba zomthetho ezihambisana nezwe lomnikazi. Noma ngesiNgisi esicacile: USuzy Lu ubambe iwebhusayithi yakhe yasogwini lolwandle kwa-AVOID nezindaba copyright futhi duck izinkinga zomthetho.
Abelo Host s uhlobo lokungazibandakanyi noma ngabe ucindezelwa.
Iqiniso ukuthi konke lokhu kuzokwenza kunjalo ukubambezeleka ukubona okungenakugwemeka njengoSuzy akunanhloso yokuhlehla.
Futhi iwebhusayithi kaSuzy Lu ibiphansi amahora angaphezu kwe-18 ngoMeyi 5th 2020.
Lokhu kungenxa yezinkinga zeseva, ukushintsha abaphathi bewebhu (engikungabazayo) noma enye into.
Ukuvuselelwa kukaMeyi 17th 2020
Kokuthunyelwe okususwe manje ku-Instagram, uSuzy Lu ubekhanyisa igesi futhi esola isisulu.
Ubuye wasebenzisa impilo yengqondo njenge-crux ukuzivikela emdlalweni awushukumisayo kusukela ekuqaleni.
Ngisho nokuya kude nokwenza ifayili le- ukuzibulala isihloko se-clickbait ku-YouTube ngemuva kokuthunyelwe okususwe ku-Instagram.
Ngemuva kokuvezwa kwalokhu, ukulungiswa kulandelwe nge-tweet evuma ukwenza i-clickbait. Kungakhathalekile ukuthi kuyinkinobho yokuchofoza ehlobene nokuzibulala, okungeyona into yokuhlekisa ngayo.
Lokhu bese kulandelwa i- okuthunyelwe kwezempilo yengqondo ku-Instagram.
Kuthunyelwe ngoMeyi 19th 2020.
suzy lu posta yezempilo yengqondo instagram
suzy lu mental health instagram okuthunyelwe
Ithiyori yokuthi kungani i-YouTube ivikela uSuzy Lu
Ngifuna ukusho, nginomqondo ngoSuzy Lu. Ngicabanga ukuthi u-f * cking 'Mphathi' wakhe. Ngeke sibe khona esinye isizathu esingokomqondo sokuthi umsebenzi ku-YouTube aphule imithetho ye-Safe Harbor nemithetho ye-copyright futhi asindise isiteshi sikaSuzy.
Sidinga ukuthi siphenye ukuthi ngubani amshelayo, bese sibadalula!
- Violet (@MsHopePlays) Ephreli 19, 2020
Kufanele simise uSuzy, futhi simvimbe, sidinga ukumisa ukuthi ngubani omsizayo ngemuva kwezigcawu zokukhohlisa uhlelo.
Le yimpi yeNkululeko Yokukhuluma! #StopSuzyLu @JohnSwanYT @TipsterNewsTeam @Ukhozi_fm @Ukhozi_fm @NomzamoMbatha @SubToOptimus
Umqondo lapha yingakho uSuzy Lu athola 'ukwelashwa okukhethekile' futhi ukwazile ukubaleka nezinto ezenza cha ibhizinisi ukuqonda ekugcineni kwe-YouTube, kukhona i- ubuhlobo bomuntu siqu siyaqhubeka.
Ngaphandle kwalokho i-YouTube ibingazukuyibuyisela i-akhawunti yayo emahoreni angama-48, Esikhundleni sokunikeza i-TV Tokyo izinsuku eziyi-10 zokuthatha izinyathelo zenkantolo (njengoba kudingwa umthetho).
Kungani le drama ihambelana nomphakathi we-anime
Uma i-Funimation ne-Viz Media bethatha isinyathelo, umphakathi we-YouTube osabela kuzoshintsha.
Kuyafana futhi uma i-TV Tokyo neMX International behlisela phansi ipulatifomu kaSuzy Lu.
Amavidiyo wokuphendula ama-Anime ngeke aphinde afane.
I-YouTubers ebhodini lonke ANGEKE ikwazi ukwenza amavidiyo wokuphendula ngokuzayo (ngenxa yelungelo lobunikazi).
Futhi ukuphulwa kwe-copyright ye-anime kuzoba okuqinile ku-YouTube.
Angilona uhlobo okufanele ngilubuke amavidiyo we-anime kusuka ku-YouTubers njengoba injalo. KODWA ngike ngabuka amavidiyo wokuphendula ama-anime phambilini, futhi anginankinga ngawo.
Ingabe okuqukethwe kwasekuqaleni ngomqondo ongokoqobo? Cha. Kepha lokho akumele kube nendaba uma kungesikho 'ukudwengula' noma ukuhlukunyezwa okusobala kwelungelo lobunikazi.
Kungenzeka kungatholi lokho okungathi sína futhi bangavele benze isibonelo ngokwenziwe. Ngaphandle kwayo kuyanda futhi kuyonakala Ama-Anime YouTubers imisebenzi.
Kepha ngamanga, ukuphendula okuncane kanye nezimpendulo zokuzazisa ezivela kuSuzy Lu, owaziyo ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani.
Kufana nokugcoba usawoti enxebeni noma ukungayinaki inkinga futhi unethemba lokuthi kuzophela.
Lokho kwenziwa kuphela ukuthi lo mdlalo we-copyright (nezimangalo ezingamanga + kuhlanzwa i-Twitter ukufihla ubufakazi) kubi kakhulu.
Isimo sami kulolu daba
Ngikhuluma ngenkululeko kuphela. Ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuziveza.
Ukunemba kwezepolitiki, I-SJW neminye imbudane igcwele online uma kukhulunywa ngeLOUD encane.
Iningi e-USA., Bambalwa e-UK. Futhi izama ukonakalisa ubuciko, ubuciko nezinye izinhlobo zemibono.
Abakwa-YouTubers abakwazi ngisho nokukhuluma ngalokhu ngaphandle kwekhanda, yingakho-ke ngesinye isizathu nginqume ukukwenza.
Kepha uSuzy Lu? Akekho kule drama obekufanele afike kuleli qophelo. Kepha ukungathembeki, ubuncane nokuzazisa sekukufinyelele lapha.
Khumbula - nguyena owathi wayezoba yi-SUE Tokyo TV. Okuwubufakazi bokuthi unamafutha kangakanani.
Angikwazi nokucabanga ngidlula ku-Twitter (noma kunoma iyiphi ipulatifomu) ngibika abantu ngokuba nombono ngami.
Lokho ngukungavikeleki ngaphandle kokuthi sikhulume ngokwehlisa isithunzi nangokungahloniphi okusobala.
U-Steeljo ibambe iqhaza kuyo yonke le drama, ukuhlanzwa kwe-Twitter, nakho konke okunye futhi. Noma izinhloso zakhe bezisendaweni efanele (uyiSuzy's BF).
Yize kungimangaza ukuthi umdlalo wedrama awufi nanini, noma ngesikhathi ukubheduka kwe-coronavirus.
Ucabangani ngakho konke lokhu?
Ama-Anime Clickbait, Amasiko Okuthukuthela, Nokuthi Abathonya Bakwenza Kubi Kanjani
Imibukiso ye-Anime & Ama-movie abambezelekile ayi-17 + Ngo-2020 Siyabonga Ku- # Coronavirus